Fianarantsoa : Misy ny mpikarama an’ady -
AccueilRaharaham-pirenenaFianarantsoa : Misy ny mpikarama an’ady
27/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Efa manomboka sahady amin’izao fotoana izao ny fanakorontanana sy ny fampihorohoroana ataon’ireo tsy mahazaka demokrasia. Nitrangana fanakorontanana mantsy omaly ny lanonam-pitokanana efitrano fanaovana fanatanjahantena nataon’ny filoha Hery Rajonarimampianina tao Fianarantsoa.
Teny amin’ny kianjan’ny fahamarinana nanoloana ny garan’i Fianarantsoa no nanatanterahana ny kabary nifandimbiasana taorian’ny fitokanana, ary vahoaka marobe no nanotrona ny Filoha nandritra izany. Teo no tsy zakan’ny sasany ka nahatonga azy ireo nanakarama mpikarama an’ady nanakorontana ireo vahoaka nanotrona ny Filoha. Raha ny fantatra dia olona ampolony efa nisy fofompofon-toaka no niezaka niditra teny afovoan’ireo vahoaka nifanitsa-kitro, ka nanositosika ireo olona nanotrona ny Filoha. Raha ny voalazan’ny sasany tamin’ireo olona nanatri-maso dia nisy olona nizara vola 5 000 sy 10 000 Ariary tamin’ny lalana nihazo manoloana ny gara izay nanaovana ny kabary nifandimbiasana. Olona efa voafantina no nomena ireo vola ireo, ary taorian’ny fanakorontanana vao nazava tamin’ny olona nahita fa hay ilay nanakarama no nanao ny fizaram-bola.
Fianarantsoa no anisan’ny nahazo fotodrafitrasa be indrindra tao anatin’ity fitondran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ity. Anisan’ny lehibe indrindra tamin’izany ny fanamboarana ireo lalana rehetra tao an-tampon-tanàna, na fananganana sekoly fanabeazana fototra, sy CEG maro. Rariny araka izany raha tonga maro ireo vahoaka tany an-toerana nanome voninahitra ny Filoha nandritra ny fitokanana notanterahina omaly, satria nahatsapa ireo soa natao azy. Tsy nahazaka izany anefa ny ireo sasany ka dia efa nanakarama mpikarama an’ady sahady na dia mbola tsy ao anatin’ny fampielezan-kevitra aza izao fotoana izao. Ambetin-tenin’ny Filoha tokoa mantsy ny hoe mbola asa amin’ny maha filoham-pirenena azy no ataony ankehitriny fa mbola tsy fampielezan-kevitra. Efa voafaritry ny lalàna rahateo ny daty ahafahana manatanteraka izany. Izao sahady anefa no mitranga.
Mampanahy araka izany ny ho fiatrehana ny fampielezan-kevitra ao anatin’izao fifidianana filoham-pirenena 2018 izao raha tsy misy ny fepetra hentitra sy matipaika raisin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Tsy maintsy ho korontanin’ireo tsy mahazaka demokrasia mantsy izay kandidà heverin’izy ireny fa matanjaka na dia mbola tsy fampielezan-kevitra aza no atao. Hitohy amin’ity andro ity ny fitokanana zava-bita ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony.
Omaly tamin’ ny 11 ora antoandro teo ho eo, tao amin’ ny hopitaly St pierre La Réunion, no nindaosin’ny fahafatesana ny profesora Zafy Albert, teo amin’ny faha sivifolo taonany , izay filoham-pirenena malagasy teo aloha. ...Tohiny